Izesekeli Izingxenye for BlackBerry Passport — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Izesekeli Izingxenye for BlackBerry Passport
English	Español	Français	Deutsch	日本語	العربية	हिन्दी	Bahasa Indonesia	中文	বাংলা
Amacala, amashaja kubakaki nezinye izesekeli izingxenye ezisele for BlackBerry Passport
Bheka futhi: Izesekeli kanye izingxenye ezisele for BlackBerry Passport Isiliva-Edishini
"Masthev" -Accessories salokhu smartphone elikhethekile enkulu screen isikwele ikhibhodi ezintsha nge esakhelwe inzwa ifilimu zokuzivikela esikrinini, icala bewathwele-earphone. Okokuqala okubili ukunikeza isivikelo egcwele idivayisi yakho kusukela izici zangaphandle, futhi headset ikuvumela ukukhuluma Passport edonsa ekhukhwini lakhe, futhi-hands-free. Abashayeli futhi bancoma ukuthi uthenga ishaja emotweni.
BlackBerry Passport has a ibhethri capacious kakhulu, isikhathi sakhe esiningi kakhulu ishaja, ngakho lapho ekhetha look for the amperage okukhipha, okuthandayo futhi abona kudingekile ukuba akunike ishaja yangempela.
Passport Nokho futhi oluphakeme kudivayisi okuthembekile, ungase uhlangabezane nezinkinga ezihlukahlukene, ngokwesibonelo, ikhamera zizoma ukusebenza, ikhibhodi, noma kulimaze esibukweni. Kulokhu, siphakamisa ukuthi ukuthenga ezihlukahlukene izingxenye kanye izingxenye ukukhanda Passport BlackBerry . Futhi uma udinga ukudlulisela brand new oxhumana smartphone, ubuyekeze uhlelo lakho lokusebenza, faka izinhlelo zokusebenza noma ukumisa — ikheli le-imeyili ukuze BlackBerry Isevisi yokusetha !
Utshalomali yimpumelelo kakhulu ku ukufakwa iyunithi ikhibhodi Russian. Ngemva BlackBerry — lena thuluzi ukuze uthayiphe umbhalo ngokushesha, ngokunembile futhi kahle!
Categories of page Izesekeli Izingxenye for BlackBerry Passport
Evundlile Isikhumba Ikesi ukuvulwa umsebenzi Diary umi BlackBerry Passport
I laconic ngephimbo elifanayo Ikesi Stand sici Ukugunda inikeza isivikelo egcwele Passport yakho kuzo zonke izinhlobo yokulimala. It has a gumbi for credit cards ngaphakathi.
I original film for esivikelo esobala (2 izingcezu) kwesikrini ukuze BlackBerry Passport
Kungase kutholakale inkampani eliphakeme quality BlackBerry. Izacile, isikhathi eside futhi kahle esobala ifilimu ukuvikela isikrini kusuka ekuklwebhekeni nokungcola. Ukusebenzisa sokuqala izinga okusezingeni izesekeli, uhlinzeke ukunakekelwa edingekayo ukuze smartphone yakho futhi baphile isikhathi eside service yayo.
Silicone Case for icwecwe lula BlackBerry Passport
Made of impahla eqinile futhi nezimo. Thembeke ukuvikela ifoni yakho esuka ezingezinhle namathonya zangaphandle. inhlanganisela Creative ukwakheka kanye imigqa abushelelezi.
Umbadlana for BlackBerry Passport
Kuyinto element main kanye eqolo smartphone. Lokhu umbadlana liyisikhungo computer, futhi i-elementi kokukuhlobanisa. Kwezinye izimo, esikhundleni umbadlana uwukuphela kwekhambi kungenzeka smartphone ukukhanda Passport.
Ikhamera T20 main for BlackBerry Passport
The main (bakhulise) ngekhamera BlackBerry Passport. 13 Mpixel. izingxenye ezisele Original.
Russian ikhibhodi umhlangano nebhodi kanye element inzwa BlackBerry Passport (umbhalo)
Inikeza lula umsebenzi ngedivayisi yakho. High-izinga umbhalo original keyboard English. Lokhu ikhibhodi isivele efakwe ebhodini substrate yakhiwa element inzwa ( "isiqeshana sokuhambisa iminwe"), ukulungele ukufakwa.
Screen nomvikeli BlackBerry Passport
Enye yezinto ezibalulekile kunazo add-on efonini yakho, lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi Passport, amadivayisi nge isihenqo esikhulu kakhulu. It presents ezimbili ongakhetha.
uMvikeli babelibiza ezimangelengele Vikuiti 3M MySafeDisplay for BlackBerry Passport screen
Le filimu wamandla anda, kuveza le nkampani German Vukuiti 3M. I crystal ecacile, kulula ukunamathisela, amelana imihuzuko kanye uhlevane.
Proprietary ultra-nomzimba omncane esibukweni nomvikeli Savvies acwebile screen for BlackBerry Passport
Ngakho mncane futhi esobala ukuthi ngeke angaluboni phambi kwaso. ukuvikelwa Excellent, ngenxa yokwaziswa izinga. Uma ufuna ukulondoloza kuya esiphezulu zonke izakhiwo screen, Savvies — ifilimu lwakho olukhethile.
ingilazi babelibiza ifilimu zokuzivikela for the screen Nillkin Amazing H for BlackBerry Passport
The latest Ukuthuthukiswa — ifilimu-glass, ukwazi emangalisa ngezici zawo Amazing! Namathela lokhu ifilimu, uyobe wenze smartphone yakho njengomuzi ongangeneki ngokuphelele! Bheka incazelo — kuyamangaza, kodwa kuyiqiniso! Izinguqulo kokubili passport "okuvamile," futhi Passport Silver Edition.
Evundlile Isikhumba Ikesi umsebenzi wokuvula Stand BlackBerry Passport
inobungane futhi accessory ye personable. It has linezingxenye for imali kanye credit cards ngaphakathi. Ziphethe ukuma function. Perfect for umuntu omatasa.
I original battery Bat-58107-003 for BlackBerry Passport
Efanelekayo ukuphindisela ibhethri onesici noma webhethri inqolobane ngichithe. Ibhethri original libhekene izinga okusezingeni eliphezulu nokuphila isikhathi eside. 3400 mah, 12,92 Wh, le Li-ion.
Keyboard Esekelwa ngoba BlackBerry Passport
Spare-substrate, okuyinto ifilimu, okuyinto benzelwe banana metal izinkinobho, kubuyela endaweni yalo emva ngamunye ngokucindezela.
Platform noma substrate enikezwe izingxenye efakwe nezinye smartphone.
Screen LCD + touch screen (isikrini) + base kwenhlangano ukuze BlackBerry Passport
I original smartphone uphiko ukuthi ubonisa ulwazi futhi ngesikhathi esifanayo zilalela imiyalo umsebenzisi etholwe panel touch (uthinte ukushukuma komzimba). Izingxenye kakade efakwe esisekelweni, lonke sakhiwo sinamagumbi okuhlala angu spare okuyingxenye olulodwa, ngakho-ke, ikhambi ngomumo eyenziwe for ukufakwa. Umonakalo Protection Corning Gorilla Glass 3. BlackBerry Quality.
I original English ikhibhodi umhlangano nebhodi kanye element inzwa BlackBerry Passport
replacement Ideal for ukukhanda noma uthuthukise smartphone yakho ukubukeka, BlackBerry production. Lokhu ikhibhodi isivele efakwe ebhodini substrate yakhiwa element inzwa ( "isiqeshana sokuhambisa iminwe"), ukulungele ukufakwa.
ikhibhodi wesifunda BlackBerry Passport
Uma lo mshini uthola ezimanzi, ezinye izinkinobho azisebenzi, kabili, noma azisebenzi njengoba kufanele — udinga esikhundleni sale chip. Lona yasekuqaleni ingxenye yomzimba ezifana — chip setha ekuqaleni, lapho ukuhlangana ifoni.
Circuit switch (phezulu) ngoba BlackBerry Passport
Lubhekele uvala noma uvula kudivayisi futhi off. izingxenye Original esikhululekile, BlackBerry ukukhiqizwa.
Inkinobho amandla (engenhla) for BlackBerry Passport
Izinkinobho ngoba uvala noma uvula kudivayisi futhi off. izingxenye Original esikhululekile, BlackBerry ukukhiqizwa.
Uhlangothi hulls inkinobho BlackBerry Passport
Izinkinobho ukulawula smartphone asethwe ku bezel. Isethi kuhlanganisa ezintathu eziseceleni ezenziwe metal.
ikhamera imibhobho imvelo BlackBerry Passport
spare Integrated, kuhlanganise PCB-58898-002 * chip ne imibhobho emibili, antenna kanye namabhodlela kwikhamera enkulu.
I original emuva cover kwenhlangano ukuze BlackBerry Passport
Iningi ukugqoka izingxenye Passport smartphone, uyafakaza naye izakhi functional kanye smartphone, ngakhoke kudingeka ukushintshwa njalo. Ikhava esisha 'singu okuqabula "ukubukeka smartphone yakho futhi ngeke aphinde angishaye omele. izinga Original: nse ikhava ifoni ifakwe efektri.
Lower umzimba lwamapulangwe abezindaba izikhulumi kanye antenna BlackBerry Passport
Isixazululo turnkey ukushintshwa. BlackBerry zokukhiqiza, ikhwalithi.
Ezinye U-cover ebiyelwe ngaphandle logo opharetha BlackBerry Passport
Akhiwe ngezansi ikhibhodi, futhi ingenye ngokwangaphandle izitshengiselo ezibonakalayo iningi icala. izingxenye Original spare: a u-cover efakwe kwi smartphone ekucaleni ngesikhathi umhlangano.
Ingxenye engenhla yomzimba BlackBerry Passport
Ihlanganisa engxenyeni engenhla ezingemuva smartphone stylistically kuvumelana cover original. Lena element original yomzimba, BlackBerry ukukhiqiza, ekuqaleni efakwe kwi smartphone.
I-bezel yokuqala (ngaphandle eziseceleni) ukuze BlackBerry Passport
Uma umsebenzi kulezi zingxenye ku usebe wakho agcinwe ngokuphelele, futhi ushintsha bezel ukuthuthukisa ukubukeka kwalesi — ezisele okukhethayo. BlackBerry ukukhiqizwa, izingxenye ezisele.
Lasekuqaleni bezel kwenhlangano ukuze BlackBerry Passport
Buhlanganisa amakhebuli abalulekile futhi izinkinobho, futhi yisisombululo ephelele ukuze ifakwe. BlackBerry ukukhiqizwa, izingxenye ezisele.
Isixhumi chip eziseceleni ngoba BlackBerry Passport
isixhumi umbadlana ukuxhuma chip ohlangothini okhiye smartphone. izingxenye ezisele Original.
Isixhumi ekamelweni main BlackBerry Passport
isixhumi umbadlana ukuxhuma kwikhamera enkulu. izingxenye ezisele Original.
ikhibhodi isixhumi ngoba BlackBerry Passport
elementi Small exhumanisa ikhibhodi umbadlana. BlackBerry ukukhiqizwa, ikhwalithi.
Isixhumi LCD isikrini bese uthinta isikrini ukuze BlackBerry Passport
isixhumi umbadlana ukuxhuma nge touch screen. izingxenye Original esikhululekile, BlackBerry ukukhiqizwa.
Power Isixhumi (ibhethri) T2 for BlackBerry
Izixhumi, okuyinto ixhunywe ngamandla ibattery. Iyahambisana BlackBerry Passport, Z30, Q5.
Isixhumi SIM khadi (-SIM khadi Isixhumi) T12 for BlackBerry
-SIM khadi izixhumi T12 uhlobo BlackBerry Passport, inikeza uxhumano kwiSIM khadi ye-GSM.
ikhamera Front for T19 BlackBerry
ikhamera Front for BlackBerry Passport, Q5, Z30, isinqumo 2MP. izingxenye Original esikhululekile, BlackBerry production.
Isilawuli voice (isipikha) T14 for BlackBerry
Isilawuli voice (isipikha) T12 for BlackBerry
Udlala izwi interlocutor yakho ngesikhathi ingxoxo. Efanelekayo eziningi BlackBerry tinkhulumo, isibonelo, Priv, Classic, Q10, Z30. I original eliphezulu spare.
Isilawuli voice (isipikha) T16 enhlanganweni nge microphone for BlackBerry Passport
Udlala izwi interlocutor yakho phakathi nengxoxo, futhi imakhrofoni kusiza ukuthuthukisa izinga zokuxhumana — BlackBerry ubuchwepheshe nokuphathelene. I original eliphezulu spare.
Vibration motor inhlangano (isidlidlizi Motor) T4 for BlackBerry Passport
It nokobana umsebenzi isixwayisi sokudlikiza on smartphone yakho Passport.
jack Audio (earphone Jack) T15 for BlackBerry Passport
Audio Isixhumi hlobo T15 BlackBerry Passport. Ivumela wena ukuxhuma efonini earphone yakho, imoto stereo system nge aux-ikhebula kanye namanye amadivayisi media, kukhona nezinye izinto futhi elawulwa nge Isixhumi 3.5mm.
Isikhala sememori khadi (sememori khadi) T8 for BlackBerry
Ukuze ufunde imemori khadi ye-microSD ukuba BlackBerry Passport — inikeza inkumbulo eyengeziwe yokugcina idatha.
flash chip for BlackBerry Passport
Ikhamera flash ikuvumela ukuthatha izithombe namavidiyo ezimweni ephansi ukukhanya. Chip kuhlanganisa flash futhi ingxenye contact.
Chip ukusondela izinzwa nokukhanya esikhundleni BlackBerry Passport
Ukuhlanganisa izinzwa ukusondela kanye chip ukukhanya. izingxenye ezisele Original.